အင်္ဂါမောင်: ဘ၀သမိုင်းကို ဘာစုတ်တံနဲ့ရေးမယ်
အဲဒီ ဘီးကြီးပေါ့။ ၀င်ရိုးတွေ ထောက်တိုင်တွေ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် မပြတ်သေးသမျှ ဂျတ်အေး သူ့အမေရိုက်သလို...
သံသရာက ရှည်တယ်။ ဘ၀က တိုတယ်။ လောဘစိုစို ဒေါသပိုပို မောဟပျိုပျိုတွေနဲ့ နေညိုချိန်ကို စောင့်မနေပါနဲ့။ လူဖြစ်လာတာဟာ သေပြီးတဲ့အခါ မြေသြဇာ ဖြစ်ရုံသက်သက်ဆိုရင် အဲဒီလူ သမိုင်းကတော့ ခပ်ရိုင်းရိုင်းဘဲ ဖြစ်နေမှာသေချာတယ်။
ဘ၀သမိုင်းကို လောဘစုတ်တံနဲ့ ရေးခြယ်မလား။ ဒေါသစုတ်တံနဲ့ ရေးခြယ်မလား။ မောဟ စုတ်တံနဲ့ ရေးခြယ်မလား။ မာနစုတ်တံနဲ့ ရေးခြယ်မလား။ အဲဒီလို စုတ်တံခပ်ညစ်ညစ်နဲ့ ရေးခြယ်တဲ့ ဘ၀သမိုင်းဟာလဲ ခပ်ညစ်ညစ် Record အနေနဲ့ဘဲ ကျန်ရစ်နေခဲ့တော့မှာပေါ့။
ဒါဖြင့် ဘ၀သမိုင်းကို ဘာစုတ်တံနဲ့ ရေးခြယ်မလဲ။ ဘ၀သမိုင်းကို အတတ်ပညာဝိဇ္ဇာနဲ့ ရေးခြယ်မယ်။ အလေ့အကျင့်စရဏနဲ့ ရေးခြယ်မယ်။ ကူညီထောက်ပံ့မှု ဒါနနဲ့ ရေးခြယ်မယ်။ ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှု ဝေယျာဝေစ္စနဲ့ ရေးခြယ်မယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင်တော့ စုတ်တံကောင်းကောင်းနဲ့ ဘ၀သမိုင်းကြောင်းကို ရေးခြယ်မယ်။
ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးဟာ စုတ်တံဖျားပေါ်မှာဘဲ မူတည်တယ်။ စုတ်တံဆိုးရင် ရုပ်နာမ်သမိုင်းဆိုးမယ်။ စုတ်တံကောင်းရင် ရုပ်နာမ်သမိုင်းကောင်းမယ်။ မဟုတ်မခံစိတ်နဲ့ စုတ်တံထိပ်ကို ခပ်ရိုင်းရိုင်းရေးခြစ်ရင်တော့ ဘ၀သမိုင်းက ခွေးထက်ရိုင်းသွားတော့မှာပေါ့။
စုတ်တံကိုကောင်းပါစေ။ စုတ်တံကို မဟောင်းပါစေနဲ့။ စုတ်တံကို ထက်ပါစေ။ စုတ်တံကို မပျက်ပါစေနဲ့။ စုတ်တံကို ခိုင်ပါစေ။ စုတ်တံကို မယိုင်ပါစေနဲ့။ စုတ်တံ ကောင်းကောင်း ထက်ထက် ခိုင်ခိုင်ဖြစ်မှ ဘ၀သမိုင်းက မိုးထက်တိုင်တက်ပြီး ဟိုး အထက်ဘ၀ဂ်တိုင်အောင် ကောင်းသတင်းကြိုင်လှိုင်ကျန်ရစ်နေတော့မပေါ့။
Posted by Ashin Janaka at Saturday, February 05, 2011
အရှင်ဇနက (အင်္ဂါမောင်)။ ၅၅ ပေါင်
ကုိုကိုမောင် (ပန်းရနံ့)။ ၅၀ ပေါင်
ဒေါ်ခင်မြမျိုးဆင့် မိသားစု။ ၁၀၀ ပေါင်
မောင်ကျော်+မုိုးငယ် မိသားစု။ ၅၀ ပေါင်
ဦးစိန်ဝင်း+ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း မိသားစု။ ၅၀ ပေါင်
ဦးတင်အောင် မိသားစု။ ၄၅ ပေါင်
စုစုပေါင်း ၃၅၀ ပေါင် တိတိ။
Four Planes of Existances
Wh462 - Four Planes of Existence in Theravada
ပဲခူးမြို့၊ ဥဿာမြို့သစ် သဇ္ဇနာရာမမင်္ဂလာဇေယျုံ ဘက ပညာရေးကျောင်းအလှူရှင်များ
၁။ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအား ရည်စူး၍ အရှင်ဇနက (အင်္ဂါမောင်)..... ၅၅ ပေါင်
၂။ ကိုကိုမောင် (ပန်းရနံ့)......၅၀ ပေါင်
၃။ မစန်းစန်းယု (လန်ဒန်) ....၂၀ ပေါင်
၄။ လူပြန်တော် ဦးကုမုဒ .........၅ ပေါင်
၅။ နှစ်ဘက်သော မိဘများကို အမှူးထား၍ ဦးစိန်ဝင်း+ဒေါ်ဆွေဆွေဝင်း မိသားစု (လန်ဒန်) ၂၀ ပေါင်
၆။ ဦးတင်အောင် မိသားစု (လန်ဒန်)... ၃၀ ပေါင်
၇။ ဒေါ်ဆင့် .... ၅၀ ပေါင်
၈။ မင်းသိန်းကျော် (ခ) Eric (Year 12) ...... ၂၀ ပေါင်
၉။ သူသူစံ (ခ) Sandra San (Year 7) ......... ၁၀ ပေါင်
၁၀။ မောင်ဟန်လင်း (လန်ဒန်) .......... ၁၀ ပေါင်
၁၁။ အရှင်နာဂသေန (ဘာမင်ဂမ်ဝိဟာရ)...... ၂၀ ပေါင်
၁၂။ နေလင်းအောင် (လန်ဒန်) .......................... ၂၀ ပေါင်
၁၃။ သီတာထွန်း (လန်ဒန်) ............................... ၃၀ ပေါင်
စုစုပေါင်း......................................................... ၃၄၀ ပေါင်
မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် (၃၄၀×၁၄၈၀=) ၅၀၃၂၀၀ ကျပ်
နောင်တ ဆယ်ပါး (မဃဒေ၀)
The links I like
Free online sports
Online Free Dictionary
သန်လျင်မြို့၊ သာယာကုန်းဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးသို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ပံ့ပိုးကြသူများ
၁။ ကွယ်လွန်သူ မိဘနှစ်ပါးအား ရည်စူး၍ အရှင်ဇနက (အင်္ဂါမောင်) စတာလင်ပေါင် ၅၀
၂။ ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) ၊ စတာလင်ပေါင် ၅၀
၃။ အရှင်နာဂသေန (ဘာမင်ဂမ်) ၊ စတာလင်ပေါင် ၂၀
၄။ ဦးတင်အောင် မိသားစု (လန်ဒန်) စတာလင်ပေါင် ၅၀
၅။ ကွယ်လွန်သူ မသက်သက်အား ရည်စူး၍ ကိုမျိုး+မဖြူဖွေး မိသားစု(လန်ဒန်) ၊ စတာလင်ပေါင် ၃၀
၆။ ကိုကို ညီညီ (လန်ဒန်) စတာလင်ပေါင် ၂၀
၇။ မောင်ကျော်+မိုးငယ် (သမီး) ဟတ်စုလွင် (လန်ဒန်) စတာလင်ပေါင် ၃၀
၈။ မောင်နေလင်းအောင်(လန်ဒန်) ၊ စတာလင်ပေါင်ငွေ ၂၅
၉။ မသီတာထွန်း(လန်ဒန်) ၊ စတာလင်ပေါင်ငွေ ၂၅
၁၀။ မောင်အောင်မျိုးသန့်(လန်ဒန်) ၊ စတာလင်ပေါင်ငွေ ၁၀
၁၁။ မပန်းဖြူမွှေး(လန်ဒန်) ၊ စတာလင်ပေါင်ငွေ ၃၀
၁၂။ Vijay (လန်ဒန်) ၊ စတာလင်ပေါင်ငွေ ၁၀
၁၃။ ဒေါက်တာလှစိုး + ဒေါ်ဝေေ၀လွင်စိုး (လန်ဒန်) ၊ စတာလင်ပေါင်ငွေ ၅၀
စုစုပေါင်း စတာလင်ပေါင်ငွေ ၄၀၀ တိတိ
မရမ်းချောင်း အနာကြီးရောဂါဂေဟာသို့ ဗြိတိန်မှ အလှူရှင်များစာရင်း
အရှင်ဇနက(အင်္ဂါမောင်) လန်ဒန်၊ ပေါင် ၅၀
အရှင်နာဂသေန(ဘာမင်ဂမ်) ပေါင် ၂၀
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) လန်ဒန်၊ ပေါင် ၅၀
ဦးစိန်ဋ္ဌေး+ဒေါ်ဆွေဆွေဦး (ဘာမင်ဂမ်) ပေါင် ၂၀
ဒေါက်တာလှစိုး+ဒေါ်ဝေေ၀လွင်စိုး(လန်ဒန်) ပေါင် ၅၀
ဦးတင်အောင် မိသားစု (လန်ဒန်) ပေါင် ၂၀
ကိုကို ညီညီ(လန်ဒန်) ပေါင် ၄၅
မောင်နေလင်းအောင် (လန်ဒန်) ပေါင် ၁၀
မောင်အောင်မျိုးသန့် (လန်ဒန်) ပေါင် ၁၀
မသီတာထွန်း (လန်ဒန်) ပေါင် ၁၀
ကိုဟန်လင်း (လန်ဒန်) ပေါင် ၂၀
လူပြန်တော် ဦးကုမုဒ (လန်ဒန်) ပေါင် ၁၀
မဟေမာမြတ်ခိုင်+မနန္ဒာထွန်း (လန်ဒန်) ၀ှီးချဲတစ်စီးအတွက် ပေါင် ၄၅
စုစုပေါင်း စတာလင်ပေါင်ငွေ ၃၆၀
ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ စက်ဆန်းမီးဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ အလှူရှင်များ စာရင်း
အရှင်ဇနက (အင်္ဂါမောင်) သန္တိသုခ၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၅၀
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၅၀
မေဓာဝီ (တွေးမိတွေးရာ ရေးမိရေးရာ) ၀ူဗာဟင်တန်။ စတာလင်ပေါင် ၅၀
စုမေသူ၊ လက်စတာ။ စတာလင်ပေါင် ၂၀
ကိုကျော်ခိုင်စိုး+မနွယ်နီဝင်း (ခ)ရင်ရင်၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင်၂၀
အရှင်နာဂသေန၊ ဘာမင်ဂမ်ဝိဟာရ၊ ဘာမင်ဂမ်။ စတာလင်ပေါင်၂၀
ဦးတင်အောင် မိသားစု၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၂၅
ဒေါက်တာလှစိုး +ဒေါ်ဝေေ၀လွင်စိုး၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၁၀
ကိုဝေလင်းထွန်း+မစူးစူး၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၅
ကိုမောင်ကျော်+မမိုးငယ် သမီး ဟတ်စုလွင်၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၄၀
ကိုကိုနှင့်ညီညီ၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၄၅
လူပြန်တော် ဦးကုမုဒ၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၅၀
ကိုမျိုး+မဖြူဖွေး မိသားစု၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၃၀
မောင်နေလင်းအောင်၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၂၅
မသီတာထွန်း၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၂၅
မစောငြိမ်းအေး၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၂၀
ဒေါ်မော်လီ၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၂၀
ဖြူဖြူ၊ လန်ဒန်။ စတာလင်ပေါင် ၁၀
-စုစုပေါင်း စတာလင်ပေါင် ၅၁၅ ပေါင်။
ဖလံ ဝေ ကဒလိံဟန္တိ
ဖလံ ဝေဠုံ ဖလံ နဠံ
သက္ကာရော ကာပုရိသံ ဟန္တိ
ဂဗ္ဘော အဿတရိံယထာ (စူဠ၀ါ-၃၄၆)
ငှက်ပျောသီးက ငှက်ပျောပင်ကို သတ်၏
၀ါးသီးက ၀ါးပင်ကို သတ်၏
ကျူသီးက ကျူပင်ကို သတ်၏
အဿတိုရ်မြင်းရဲ့ ကိုယ်ဝန်က အဿတိုရ်မြင်းကို သတ်၏
လာဘ်လာဘပူဇော်သက္ကာရက လူမိုက်အား သတ်၏။
ပုဂ္ဂိုလ်အထု၊ ထိုအစုတွင်၊ အာယု ပုည၊ ခယ နှစ်မှာ၊ တဖြာဖြာကြောင့်၊ ဗြဟ္မာတို့အား၊ စုတိငြား၏၊ နှစ်ပါးမည်ထ၊ ထိုခယ၌၊ ဟာရ ကောပါ၊ ထည့်၍သာလျှင်၊ လေးဖြာအပေါင်း၊ နတ်သေကြောင်းတည့်၊ ၎င်းထိုမှ၊ မနုဿကား၊ ခယနှစ်ချက်၊ ဥဘယက်နှင့်၊ လက်နက်ဟူပေ၊ ဥပစ္ဆေဖြင့်၊ လေးထွေအလို၊ သေကြောင်းဆို၏။´ (မဃဒေ၀၊ ၁၄၂)
`ဆယ်ဘုံရူပ၊ တိဟိတ်ရ၏၊ သည သုသာ၊ ငါးသုဒ္ဓါမှာ၊ ရိယာခေါင်ဆုံး၊ သုံးယောက်စီရ၊ အရူပ၀ယ်၊ စမဂ်ပယ်သည်၊ ရှစ်သွယ်တိဟိတ် မကြွင်းတည်း။http://ukovida.multiply.com/journal/item/73/73
Sun Lun Sayadaw_U Kawi_p-66
လူဆိုရင် လူဖြစ်ရကျိုးနပ်အောင် ပြုမူဆောင်ရွက်သင့်တယ်။
Useful For Myself (11)
ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ် ပါဠိတော် (1)
ပရိတ်ကြီးနိဿယသစ် (သပြေကန်မူ) (12)
Useful for myself (4)
Useful for myself (3)
Useful for myself (2)
Useful for myself (1)
၂ နှစ်နေခွင့် ပေါင် ၁၄၅၄.၅၇
ခေါင်းဆောင်း (Not ခေါင်းဆောင်)
"တုပ်..တုပ်..ဂျိန်း" တွေ များနေပြီလား
Live it up (ပါဠိversion)
သီတဂူ Study Tour အင်ဒိုနီးရှား
ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွားရေး
ဘလောဂ့်ရေးခြင်း တနှစ်ပြည့်နှင့် ကရင်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနယ်မြေသို့ အလည်ရောက်ခြင်း အမှတ်တရ
Mega Essays .com - Over 100,000 essays, essays and term papers available for instant access!!
Bagan, Myanmar | Ancient Bagan .com
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု
Myanmar Online Encyclopedia - လတ်တလောအပြောင်းအလဲများ [my]
Dhamma Web, "One who sees the Dhamma sees me. One who sees me sees the Dhamma." Buddha
ပဲခူးတုိုင်း ရေတာရှည်မြို့နယ် ထန်းတောကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်း ပြင်ဆင်နုိုင်ရန်အတွက် ဗြိတိန်နုိုင်ငံမှ လက်ခံရရှိသော အလှူငွေစာရင်းကုို အလှူရှင်...
How is the role of women different in Buddhism and Hinduism?
(Word count: 2186) Women have been involved in religious activities in Buddhism since Buddha’s life time. Compared to men, women are though...
ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ အတော်လေးရင်းနှီးတယ်။ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဆိုပေမဲ့ သက်တော်က သိပ်မကြီးသေးပါဘူး။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကျောင်းထော...
ဒီပို့စ်လေးက ဒကာတော်ဆရာဟန်ကြည် ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ သူရဲ့ ချစ်သောအညာ အပိုင်း ၅ မှာ ပါရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတချိ...
မကြားချင်ဆုံးစကား ကြားလိုက်ရသည်။ မကြားချင်ပေမဲ့ တနေ့နေ့တော့ ကြားရလိမ့်မည်ဟုတော့ သိနေသည်။ လူသားတွေရဲ့ ကမ္ဘာကြီး ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းဟု အမည်ပေ...
ပြိုင်တွန်းလျှင် ရွေ့ နိုင်ပါသည် တဲ့။
" ပညာမြင့်မှ လူမျိုးတင့်မည်" ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်း တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ အနာဂတ် သာယာလှပဖို့အတွက်ဆိုရင် ရေရှည် စီမံကိန်းနဲ့ သေချာ...
"ဥဿာဆိုတာ ပစ်ထားလို့ မရတဲ့ နေရာ" တဲ့။ မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့ က သေချာ ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီးမှ ရင်တွင်းက ထွက်အံကျလာတဲ့ စကားလုံးလေ...
(က) ဒီခွက်ကလေးက အနှစ်နှစ်အလလ တောင်းစားလာခဲ့တဲ့ ခွက်ကလေး နဲနဲတော့ ညှိတက်လာပြီ အခုဆို နောက်ထပ် ခွက်သစ် တစ်လုံး ၀ယ်ဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ မိ...
ကိုယ့်ဇနီးနဲ့ကိုယ် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်ခြင်း
နဲနဲ မသင့်တော်သလို ဖြစ်နေပေမဲ့ ဗဟုသုတဖြစ်စေဖို့ မ၀ံ့မရဲနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားများ မှတ်သားနိုင်ဖို့ပါ။ ...
Guardian Spirit of the Individuals